“မှနျးထားတဲ့အတိုငျးဖွဈမလာဘဲ ပိုးမီကို လောငျးကွေးငှဆေယျသိနျးပေးလိုကျရပွီဖွဈတဲ့ ရဲနောငျ” – Cele Gabar
“မှနျးထားတဲ့အတိုငျးဖွဈမလာဘဲ ပိုးမီကို လောငျးကွေးငှဆေယျသိနျးပေးလိုကျရပွီဖွဈတဲ့ ရဲနောငျ”
ရဲနောငျကတော့ မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့အစဉျအလာအရ Winner ဆုကွီးကို ယောကျြားလေးပွိုငျပှဲဝငျတှသောရမယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့တာဖွဈပွီး ပိုးမီကတော့ မိနျးကလေးပွိုငျပှဲဝငျတှအေားသာတာမြားနတေဲ့ Season-4 မှာ မိနျးကလေးပဲရမယျလို့ ဆယျသိနျးကွေးလောငျးကွေးထပျခဲ့တာပါ။ မနညေ့ကပွိုငျပှဲရလဒျအပွီးမှာတော့ ရဲနောငျက“ အကျစတာကိုပွောလိုကျပါ ကြှနျတျောရှုံးပွီလို့…ဆယျသိနျးရေ အမြှ အမြှ အမြှ” ဆိုပွီးသူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ပိုးမီကတော့ “စိတျမကောငျးဘူး မဲနူလေးရေ…ဆယျသိနျး လာထား” ဆိုပွီး ဝမျးသာအားရမြှဝခေဲ့တာပါ။
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့အစဉျအလာကိုခြိုးဖောကျနိုငျခဲ့တဲ့ အကျစတာကွောငျ့ ပိုးမီကတော့ ရဲနောငျဆီက ဆယျသိနျးရသှားပါပွီနျော။ ရဲနောငျကတော့ အထငျနဲ့အမွငျတကျတကျစငျအောငျ လှဲသှားခဲ့ပွီဆိုရမှာပါ။ ပရိသတျကွီးထဲမှာရော…မနညေ့က Winner ရလဒျနဲ့ပတျသကျပွီး အထငျနဲ့အမွငျထပျတူမကခြဲ့တဲ့သူတှေ ရှိလား???
“မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘဲ ပိုးမီကို လောင်းကြေးငွေဆယ်သိန်းပေးလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ ရဲနောင်”
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါအစီအစဉ်ကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 ကတော့ Season-1,2,3 ရဲ့အစဉ်အလာကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ အရင် Season သုံးခုစလုံးမှာ Winnerဆုကြီးကို ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေသာရခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် အက်စတာက Winner ဆုကြီးကိုထိုက်တန်စွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရဲနောင်ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အစဉ်အလာအရ Winner ဆုကြီးကို ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေသာရမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပိုးမီကတော့ မိန်းကလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားသာတာများနေတဲ့ Season-4 မှာ မိန်းကလေးပဲရမယ်လို့ ဆယ်သိန်းကြေးလောင်းကြေးထပ်ခဲ့တာပါ။ မနေ့ညကပြိုင်ပွဲရလဒ်အပြီးမှာတော့ ရဲနောင်က“ အက်စတာကိုပြောလိုက်ပါ ကျွှန်တော်ရှုံးပြီလို့…ဆယ်သိန်းရေ အမျှ အမျှ အမျှ” ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ပိုးမီကတော့ “စိတ်မကောင်းဘူး မဲနူလေးရေ…ဆယ်သိန်း လာထား” ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရမျှဝေခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာကြောင့် ပိုးမီကတော့ ရဲနောင်ဆီက ဆယ်သိန်းရသွားပါပြီနော်။ ရဲနောင်ကတော့ အထင်နဲ့အမြင်တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားခဲ့ပြီဆိုရမှာပါ။ ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော…မနေ့ညက Winner ရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထင်နဲ့အမြင်ထပ်တူမကျခဲ့တဲ့သူတွေ ရှိလား???
“အကောငျ့ဟကျဖို့ကွိုးစားနသေူတှကေို ဝဋျကွှေးရှိသမြှဆပျမှာပါလို့ဆိုလိုကျတဲ့ သံစဉျမောငျ”
“သားအဖ (၃)ယောက်ပေါင်းပြီး ပရိသတ်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေးပွဲလေးတစ်ပွဲ ကျင်းပသွားမည့် ချစ်ကောင်း၊အိမ့်ချစ်နဲ့ ဂျူနီယာချစ်ကောင်း”
အသံကောငျးအောငျ သငျကွားပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဆရာတှကေို ပွောပွလိုကျတဲ့ Myanmar Idol က ခငျြးမလေး အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ